बिहेअघि सेक्स गरेको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ? – Ekathmandunepal
Homeब्लगबिहेअघि सेक्स गरेको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ?
२९ मंसिर २०७४, शुक्रबार १४:१८ ekathmandu Nepal ब्लग 0
ठूलो गाँस खाना खाएर मुख वा खाएको कुरा पेटसम्म लैजाने खाद्यनली खुकुलो वा ठूलो हुन्छन् र ? हुँदैनन् नि । त्यसैले यौनसम्पर्कपछि योनी खुकुलो हुँदैन । एजेन्सी
भाउजु लाई ब्ल्याकमेल गरेर खुब गरियो
उनको चाक हल्लेको देखेर मलाई खपिनसक्नु भयो
मेरो पहिलो सेक्स अनुभव (41)
भर्जिन केटीलाई घरमा अर्धनग्न भेट्दा…. (35)
पुष्टिएकी सेक्सी बहिनीलाई (28)
माइजु त कुकुरसँग मस्ती गर्दै हुनुहुन्थ्यो (25)
मलाई पनि एकदमै योवनको मात चढेको थियो अनि (19)
यौन इच्छा भएपछि महिलाले देखाउने ५ ब्यवहार..यस्तो… (9)
यी पोजिसनहरुमा सम्भोग गर्दा लामो समय सम्म गर्न… (8)
बाबु अझ भित्रै, भाउजूले काम्दै भनिन्…देवर भाउजुको… (2,312)
मेरो होल नाइट’ ! युवा र युवतीले एकचोटी पढ्नै पर्ने… (2,285)